वैज्ञानिकहरुले ल्याय यस्तो प्रविधि जसले ६० वर्षको उमेरमा ३० वर्षजस्तै तन्नेरी देखिने ! – Annapurna Post News
April 13, 2022 April 13, 2022 sujaLeaveaComment on वैज्ञानिकहरुले ल्याय यस्तो प्रविधि जसले ६० वर्षको उमेरमा ३० वर्षजस्तै तन्नेरी देखिने !
वैज्ञानिकहरुले यस्तो प्रविधिको विकास गरेका छन् जसबाट तपाईको उमेर ३० वर्ष घट्नेछ अर्थात् यदि तपाई ६० वर्षको हुनुहुन्छ भने ३० वर्षको जस्तै तन्नेरी देखिनुहुनेछ । बेलायतको बाब्राहाम इन्स्टिच्युटका वैज्ञानिकहरु वृद्धलाई तन्नेरी बनाइदिने यस प्रविधिलाई टाइम जम्प नाम दिएका छन् । यो प्रविधिले वृद्ध व्यक्तिको शरीरको छालालाई ३० वर्षे तन्नेरीको जस्तो बनाइदिन्छ र त्यहीँ बमोजिम सक्रियसमेत बन्दछ ।